WWE Heat Index: Fa maninona no misavoritaka i SmackDown dieny izao? - Wwe
WWE Heat Index: Fa maninona no misavoritaka i SmackDown dieny izao?
Tongasoa eto amin'ny fanontana WWE Heat Index iray hafa, izay iray amin'ireo tantara lehibe indrindra tamin'ny herinandro lasa izay dia nodinihina tamin'ny alàlan'ny mikraoskaopy ary nisaina ho an'ny tanjona fandinihana.
vatolampy vs olombelona no nialako
Amin'izao fotoana izao, tsy misy zavatra hafa tiako horesahina mihoatra ny korontana izay SmackDown Live, satria ny marika manga dia toa nandalo karazana olana lehibe hatramin'ny farany.
Na dia mihoatra ny fizarana olana aza ny alin'ny alatsinainy alina, dia toa tsy dia mikorontana be ny raharaha satria mbola eo amin'ny SmackDown izy ireo amin'izao fotoana izao, izay hafahafa satria SmackDown no fandaharana tsara karatra ho an'ny olona maro. ny volana vitsivitsy lasa izay.
Betsaka ny zavatra tsy mety tato ho ato izay tsy fantatro akory hoe aiza no hanombohana, fa mety manomboka amin'ny fizarazaran-tarika tag isika.
Tsy nisy mihitsy fitifirana tao amin'ny The New Day (na The Usos, raha izany) fa toa ny lalao azontsika amin'ny SummerSlam no lalao fahatelo misy amin'ireo ekipa roa ireo. Tena zavatra mendrika ny karama farany lehibe faharoa amin'ny taona ve izany?
Arakaraka ny anaovanao lalao iray no tsy dia ahitan'ny mpankafy azy io, ary raha tsy mampiditra gimikika mahafinaritra ianao hanatsarana azy, dia mety tsy ho faly amin'ny vahoaka vaovao momba ny The New Day vs. The Usos III ny vahoaka rehefa nahita izany tao Vola ao amin'ny Banky sy ny Battleground.
Rehefa avy niaraka tamin'ny lalao marobe, tsy toa an'i Day Fifty Ish ve ity fa tsy Day One Ish izao?
Mazava ho azy, tsy dia misy safidy hafa betsaka azo idirana, na.
Ny Hype Bros dia naneso ny fisarahana fa tsy nahita fampandrosoana bebe kokoa tao izahay. Midika ve izany fa tsy hitranga ny fisarahana, na tsy te hifantoka amin'izany izao ny WWE, na tsy mahita fomba hahitana fotoana hikarohana azy izy ireo?
Ny iray amin'ny antsasaky ny The Colons dia maratra, noho izany dia tafavoaka izy ireo. Ny Ascension koa dia mitohy ho sangisangy feno, izay tsy manaitra. Ny Singh Brothers dia mbola tsy mbola nitolona tamin'ny ekipa tag iray na iray aza hatramin'ny nanatevin-daharana ny lisitra SmackDown volana lasa izay - ahoana?
Avy eo, misy ny The Fashion Police izay naseho mialoha ny Battleground mba hananana karazana famahana ny misterin'izy ireo amin'ny vola aloa isaky ny mijery. Mazava ho azy, io fizarazarana io dia tsy nanazava na inona na inona ary nandany fotoana tanteraka, satria nifarana tamin'ny toerana tena izy teo alohanay izahay: manontany hoe 'iza ireo mpanafika miafina?'
Fahadisoana izany tenany izany, satria tsy manao doka zavatra hitranga amin'ny hetsika iray ianao ary avy eo fanahy iniana atao izany tsy ataovy, fa ny mbola ratsy kokoa aza dia ny tsy fisian'ny tohiny amin'ny seho fahitalavitra SmackDown tamin'ity herinandro ity.
Ankehitriny dia efa noroahinay ianao tsy ho ahiahiana, andao esorinay tsy ho ahiahiana indray ianao. Izao no fandrosoana!
Ny famandrihana toy izany ny kiakiakan'ny ekipa mpanoratra manangana ny tenany hamorona vahaolana 'any ambanin'ny tsipika' tsy misy drafitra tena izy ao an-tsaina, mahatsapa fa lasa ela loatra io ary avy eo mijanona mandritra ny herinandro na roa fanampiny amin'ny fanantenana azon'izy ireo atao fantaro izay hosoratana. Avy eo, azon'izy ireo lazaina amintsika fa ity dia ampahany tamin'ny drafitra hatrany am-piandohana ary manantena isika fa hividy ao aminy.
Ny tsara indrindra, mandeha izy, mamonjy ny tantara ary faly ny olona amin'ny vokany, midika izany fa tsy voadona izy ireo. Ny ratsy indrindra dia nametraka fanantenana izy ireo fa tsy nifanaraka tamin'ny fikafika, ary avy eo hanana Road Dogg manakana olona maro ao amin'ny Twitter izahay izay mitsikera ny vokatra, izay nitranga indray tamin'ity herinandro ity.
Izahay koa dia nidina ekipa mpamaritra anarana raha ny American Alpha, izay namoy an'i Jason Jordan noho ny fizarazaran'izy ireo ho kintana mpitovo, nefa toa tsy niraharaha an'i Chad Gable taorian'ny nanosika azy tapa-bolana.
Heverinao fa ho tafiditra ao anatin'ny drafitra hiadiana ny tompondakan'i Etazonia i Gable, noho izy nanao lalao roa nifanandrinana tamin'i Kevin Owens sy AJ Styles, fa ny anaram-boninahitra amerikana dia ao anatin'ny fanjakana limbo hafahafa ihany koa.
Fa maninona i Styles no nahazo ny fehikibo tao amin'ny Madison Square Garden mba handefasana azy any Owens amin'ny fomba tsy dia tsara toy izany ao amin'ny Battleground, mba handresena azy roa alina taty aoriana ao amin'ny SmackDown?
Averina indray, raha toa ka hipetraka sy hametraka fotsiny ity hafa famerenana ho an'ny SummerSlam, tsy fanatanterahana ny fampanantenan'ny 'fety lehibe indrindra amin'ny fahavaratra' io ho zavatra tokony andrasana ho zavatra mihoatra ny famerenana fitaovana efa mahazatra.
Inona ny statut quo an'ny titre Etazonia ankehitriny? Owens, Styles, sa ny tetezamita fotsiny eo amin'izy roa?
Saingy tsy avy aiza, Chris Jeriko dia volana maromaro mialoha no nantenainay fa hiverina izy. Tombony lehibe ho an'ny lisitra ity, satria manao asa kalitao foana izy ary azo atokisana hiady amin'ny olona marobe amin'ny fomba fialamboly.
Na izany aza, fifanarahana iray-voatifitra ve ity, fiverenana vetivety nandritra ny herinandro vitsivitsy, na niverina ela kokoa izy, ary ahoana no ampidirina ao anatin'ny drafitra SummerSlam?
Amin'izay, inona no mitranga amin'ny The Great Khali? Saika izy no tena mifanohitra amin'ny toe-javatra misy an'i Jeriko, satria na dia mahafinaritra an'i Y2J ao anaty peratra na amin'ny mic aza i Khali dia mampihoron-koditra amin'ireo lafiny roa ireo.
Manantena amin'ny heriko rehetra aho fa tsy hahita ny tenantsika amin'ny toe-javatra ialan'i Randy Orton amin'ny The Great Khali amin'ny SummerSlam, satria io lalao io dia mety tsy ho sarobidy amin'ny fotoana laniny amin'ny karatra — indrindra rehefa SummerSlam dia adiny roa fohy kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa.
Tompoko tsara, azafady aza apetraka amin'ny The Great Khali intsony ny Tompondakan'ny WWE.
Fa maninona ary, e? SummerSlam dia iray amin'ireo hetsika Big Four! Betsaka ny olona izay ho diso anjara amin'ny fahaizany miseho ivelany satria ho very ireo roa ora ireo.
Satria tsy misy ny lalao Andre the Giant Memorial Battle Royal izay manipy ny olon-drehetra, midika izany fa ny WWE dia hanana lalao adala olona maro toa ny Fatal 4-Ways sy Triple Threats mba hanonerana, na hahita olo-manan-talenta isika manerana ny solaitrabe tsy afaka miseho endrika madio noho ny fahateren'ny fotoana.
Saingy tsy ny fotoana fotsiny no mety hanakana ny fisian'ny SmackDown amin'ny SummerSlam. Olana iray hafa ny fifanolanana mifanindry ka tsy misy vahaolana.
Hanatrika ny herinandro ambony i John Cena sy i Shinsuke Nakamura hamantatra hoe iza no hahazo ny amboaran-daza hamelezana an'i Jinder Mahal ao amin'ny SummerSlam.
Ary Rusev sy Baron Corbin? Aiza izy ireo no mifanaraka amin'ilay drafitra?
Raha tezitra mafy tamin'i Cena i Rusev ka nahatonga ny fifandonana tao amin'ny Flag Match, tena mino ve isika fa tsy hanelingelina handany an'i Cena amin'ny lalao vitany?
Toy izany koa, i Corbin dia nandeha nitsaoka an'i Nakamura ambany ary avy eo dia resy tamina pinfall - ohatra iray hafa tamin'ny nisafidianan'ny WWE ny famitana ny karama isaky ny fizarana amin'ny fahitalavitra manaraka fa tsy amin'ilay hetsika mihitsy, izay mahasosotra .
Baron Corbin dia manaraka ny dian'ny vola teo aloha tamin'ny mpandresy tamin'ny Banky ary mbola nisy fatiantoka iray hafa ihany koa.
Toa samy nanana olona te hanafika azy ireo i Nakamura sy i Cena, saingy olona tsy maintsy miady amin'i Jinder Mahal, ary na iza na iza mandresy, na i Rusev na i Corbin dia tsy maintsy mahita mpiara-miasa dihy vaovao hiara-miasa aminy na hiala amin'ny karatra SummerSlam ihany koa izy ireo!
SmackDown amin'izao fotoana izao dia manana olana mandeha miankavia sy miankavanana, sahala amin'ny hoe ny ekipa mpanoratra dia ao anaty mode panic ary miteraka olana bebe kokoa fa tsy maka rivotra lalina mieritreritra vahaolana.
Misy ny tsaho milaza fa tsy mahazo sitraka amin'i Mike sy Maria Kanellis ireo tompon'andraikitra ao ambadiky ny sehatra. Dolph Ziggler dia tsy hita nandritra ny herinandro maromaro. Ny mpilalao crybaby an'ny Aiden English dia nahazo ny fandresena tamin'i Tye Dillinger, izay nahazo fitiavana aotra hatramin'ny niakarany tamin'ny lisitra lehibe. Nofoanana ny fifampiresahana Smack ary mazava fa voaray amin'ny fomba ratsy miaraka amin'ny fototra mpankafy izany.
Indraindray, ao amin'ny WWE, misy fomba iray amin'ny hadalana ary mila miandry fotsiny isika vao hahita ny sary lehibe kokoa miseho. Na izany aza, tsy izany foana ny zava-misy, ary rehefa hitantsika fa mihozongozona ny vokatra toy ny ankehitriny miaraka amin'ny SmackDown, tsy marika tsara velively izany fa ao anatin'ny iray volana dia hanana ny 'aha!' fotoana fohy ary fantaro fa tao anatin'ny drafitra daholo izy rehetra.
Ny fiverenan'i Chris Jeriko - na dia hafahafa aza izany ary mety hilalao mandritra ny herinandro vitsivitsy - toa izany ihany no zavatra iray tamina marika be fanantenana tamin'ireo ranomasina nisedra ny marika manga rendrika.
Na inona na inona antony, ity no fanjakan'ny SmackDown Live amin'izao fotoana izao, ary ho an'ny talata alina, ny antsasaky ny lisitra lehibe sy ny fananganana an'i SummerSlam, WWE dia mila miasa amin'ny fanamboarana eo noho eo.
izay tokony hatao, raha ny amin'ny fitiavana roa ry zalahy
ny fomba hiatrehana tsy misy namana
maninona aho no mahatsapa ho olona ratsy
firy ny zaza ananan'i alec baldwin
rehefa misy bandy tsy manapaka ny fifandraisana amin'ny masony